Inowanikwa Trisquel 5.5 STS Brigantia | Kubva kuLinux
Inowanikwa Trisquel 5.5 STS Brigantia
Alexander (aka KZKG ^ Gaara) | | Kugoverwa, GNU / Linux
Maererano ne Wikipedia:
»Trisquel GNU / Linux iri vhezheni yeanoshanda system GNU izvo kernel inoshandisa Linux-yakasununguka. Izvo zvinangwa zvikuru zveiyo chirongwa kugadzirwa kweizere vakasununguka, nyore kushandisa, kuzere, uye nerutsigiro rwemutauro wakanaka… «
Iko ikozvino yave kuwanikwa, yekushandisa uye kunakidzwa kwevashandisi vayo, iyo 5.5 version de Trisquel iyo inosanganisa gnome 3 sezvo chinyorwa chepamutemo:
Iyi vhezheni ndiyo yekutanga yeTrisquel yakavakirwa paGNOME3, GTK 3 uye zvakare Linux-yakasununguka 3.0.0. GNOME 3 raive dambudziko rakakura, nekuti sezvakagadzirirwa izvozvi, hazvishandisike munharaunda medu. Iyo default interface yeGNOME 3 ndiyo GNOME Shell, chirongwa chinoda kuti 3D kumhanyisa kushanda, nekuti zvinoenderana neyakaumbwa OpenGL. Nehurombo, akawanda makadhi emifananidzo nhasi achiri kushaya yemahara mutyairi iyo inopa iyi nhanho yekumhanyisa, saka vashandisi vazhinji vanosarudza kushandisa mahara madhiraivha vanozoendeswa kune iyo "emergency" desktop nharaunda. Isu tinotenda kuti nenzira iyi vashandisi vazhinji vanogona kunzwa kuda kuisa madhiraivha asiri emahara kuti vakwanise kushandisa iyo desktop desktop, saka takafunga kutora iyo "imwe nzira" mamiriro kuti tiishandise nekutadza, nekuivandudza zvakanyanya zvinogoneka. Neraki, iyi imwe nharaunda ndeyekuitwa kweGTK 3 yeGNOME 2.x pani, iyo isingangoshandisike chete, uye yakatogadzikana kupfuura yekutanga, asi zvakare inotsigira maficha ekuwanika, mune iyo GNOME Shell parizvino inodzikira.
Imwe bhenefiti yekushandisa iyi default "imwe nzira" nharaunda ndeyekuti isu takakwanisa kuishandisa kugovera iyo imwecheteyo desktop yekuparadzira iyo vazhinji vashandisi veTrisquel vajaira. Ehezve iwe unogona kuchinjisa uye kuigadzirisa iyo nemapaneru nemaapuleti senguva dzose.
Iyi shanduro inosanganisira, pakati pevamwe vakawanda:
Tinogona download Trisquel mushanduro dzakasiyana siyana: Trisquel (iso CD 700MB), triskele i18n (ISO DVD 1.5GB), Trisquel Mini (iso CD 500MB neLXDE), netinstall (iso CD 25MB), Kodhi kodhi (ISO DVD 3.7GB).
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » Kugoverwa » Inowanikwa Trisquel 5.5 STS Brigantia
zvakanaka kwazvo kuona wifi ichishanda asi ndinoda kuti vatyairi vangu vasununguke
Pindura kune ianpocks
Ndakaiyedza imwe nguva, pandakatanga kuzvisunungura kubva kuUbuntu. zvinosuruvarisa, ini handimbogona kumisikidza iyo wifi yelaptop, zvine musoro, nekuti mutyairi ane kodzero.
Hooray yaTrisquel, ndinofunga kuti kana iyo itsva LTS vhezheni ikabuda, ndichaiyedza kuti ndione kuti zvinofamba sei, uye ndichaitsiva neMint neLXDE, inova ndiyo yandinoshandisa palaptop pandinenge ndichida shanda nenzira isinganetsi.
Hazvingave zvirinani kusarudza xfce sedhatafesi yedesktop? Kunyangwe chokwadi chiri skrini inotaridzika zvakanaka nice
Kubata xfce inobatwa LXDE,
Sergio Esau Arámbula Duran akadaro
Kune yangu XFCE neLXDE ivo vangangofanana, chete kuti LXDE yakareruka uye haina nzvimbo yekudzora uye isina mapfupi ari kumusoro kwemenu.
Pindura Sergio Esaú Arámbula Durán
Iwe unokanganwa kuti xfwm4 iri nani kwazvo pane openbox
elav <° Linux akadaro
Zvakanaka, kwandiri havana kufanana, kunze kwekunge ivo vanogovana maGtk maraibhurari. ^^
Pindura elav <° Linux
Izvo zvinoenderana nechinangwa. Handisati ndambokwanisa kubva LXDE ndasiya sei yangu Xfce (maererano nechitarisiko).
Hmm, timu yeTrisquel inoziva nzira yekuwana NXDE yakanaka… Ini ndatoedza Trisquel Dagda, ngatione kuti Brigantia anoenda sei…
Pane chero munhu akamboedza Salix 13.37?
Kukumbira ruregerero 'kwekutsausa musoro wenyaya, asi ini ndangoona izvi
Ini ndinofunga kuti chinyorwa chakanyora zvakashata, kune rumwe rutivi, uye kuti kana kurwisa kwemakomputa kwanga kuri kwechokwadi (nekuti munhu anozotenda zvinotaurwa nematsotsi eFBI), zvaisazokanganisa vazhinji vedu vanofamba famba pano, nekuti isu tinoshandisa GNU / Linux.
Oo, uye zvakanaka kuna Trisquel. Ini ndinonyatsoda kugutsikana kwake nerusununguko rwevanyoro. Kana ndisina kuishandisa, imhaka yekuti ini ndinofarira kuisa Debian kune yangu chiyero uye nekuti ini ndinoziva kuti naTrisquel ini ndaizove nezvinetso nemidziyo yekutyaira inounzwa nekombuta yangu.
Trisquel 5.5 inowanikwa!
Dhawunorodha vhezheni 12 yeMozilla Firefox izvozvi